သူမရဲ့ “မမအထာ” သီချင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းစွာ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ ဗီဒီယိုကို ပြန်လည် မျှဝေလာတဲ့ ရတနာမိုင် – Cele Posts
မိုင်လေးလို့ ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ အဆိုတော် ရတနာမိုင် ကတော့ သီချင်းဆိုကောင်း ရုံသာမကပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရတနာမိုင်က အခုဆိုရင် အသက် (၃၀) ကျော်အရွယ်ကို ရောက်ရှိနေပြီ ဆိုပေမယ့် အခုချိန်ထိ အိမ်ထောင်မပြုသေးပဲ တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီးအဖြစ် အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူအပင်မရှိတဲ့ ရတနာမိုင်က ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုပြီးအချိန်ပေးဖြစ်သလို သီချင်းသစ်တွေကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို ချပြတင်ဆက်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းကမှ “မမအထာ”ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ထွက်ရှိထားတဲ့ ရတနာမိုင်က ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အများအပြားရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ရတနာမိုင်က သူမရဲ့ “မမအထာ” သီချင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းစွာ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ ဗီဒီယိုကို မျှဝေပေးရင်း “ကိုယ်ဆိုထားတဲ့ မမအထာ သီချင်းလေးနဲ့ ကထားတာ ချစ်လိုက်တာ သူ့ကို ❤️ I love the way you dance to my song ! 🥰” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ရတနာမိုင် ချစ်မယ်ဆိုလည်း ချစ်ချင်လောက်အောင် နိုင်ငံခြားသူလေး ကတော့ အရမ်းကို သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားမလည် နိုင်ပေမယ့် ဗီဒီယိုလေးမှာ ချစ်စရာကောင်းစွာ သရုပ်ဆောင် ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ရတနာမိုင်ရဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ကပြထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီး သဘောကျကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သူမရဲ့ “မမအထာ” သီခငျြးလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးစှာ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ နိုငျငံခွားသူလေးရဲ့ ဗီဒီယိုကို ပွနျလညျ မြှဝလောတဲ့ ရတနာမိုငျ
မိုငျလေးလို့ ပရိသတျတှကေ ခဈြစနိုးနဲ့ချေါကွတဲ့ အဆိုတျော ရတနာမိုငျ ကတော့ သီခငျြးဆိုကောငျး ရုံသာမကပဲ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မကျြနှာလေးကိုပါ ပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ရတနာမိုငျက အခုဆိုရငျ အသကျ (၃၀) ကြျောအရှယျကို ရောကျရှိနပွေီ ဆိုပမေယျ့ အခုခြိနျထိ အိမျထောငျမပွုသေးပဲ တဈကိုယျတညျး အပြိုကွီးအဖွဈ အနုပညာ အလုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ အပူအပငျမရှိတဲ့ ရတနာမိုငျက ပရိသတျတှအေတှကျ ပိုပွီးအခြိနျပေးဖွဈသလို သီခငျြးသဈတှကေိုလညျး မကွာခဏဆိုသလို ခပြွတငျဆကျပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ လပိုငျးကမှ “မမအထာ”ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးကို ထှကျရှိထားတဲ့ ရတနာမိုငျက ပရိသတျ တှရေဲ့ အားပေးမှုကို အမြားအပွားရရှိ ပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာတော့ ရတနာမိုငျက သူမရဲ့ “မမအထာ” သီခငျြးလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးစှာ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ နိုငျငံခွားသူလေးရဲ့ ဗီဒီယိုကို မြှဝပေေးရငျး “ကိုယျဆိုထားတဲ့ မမအထာ သီခငျြးလေးနဲ့ ကထားတာ ခဈြလိုကျတာ သူ့ကို ❤️ I love the way you dance to my song ! 🥰” ဆိုပွီး ပရိသတျတှကွေညျ့ရှုနိုငျဖို့ မြှဝပေေးလာခဲ့ပါတယျ။
ရတနာမိုငျ ခဈြမယျဆိုလညျး ခဈြခငျြလောကျအောငျ နိုငျငံခွားသူလေး ကတော့ အရမျးကို သီခငျြးရဲ့ အဓိပ်ပာယျကို နားမလညျ နိုငျပမေယျ့ ဗီဒီယိုလေးမှာ ခဈြစရာကောငျးစှာ သရုပျဆောငျ ထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ရတနာမိုငျရဲ့ သီခငျြးလေးနဲ့ ကပွထားတဲ့ နိုငျငံခွားသူလေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကွညျ့ပွီး သဘောကကြွမယျ ထငျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွ ပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ ပုံရိပ်တွေနဲ့ ရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့ Surprise လက်ဆောင်တွေ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ယွန်းယွန်း